Foundation – Abschir Hassan Foundation
Ku saabsan Foundation
Dagaalki Ehliga e Somalia
Mudo kabadan 20 sano, ilaa wakhti xaadirka, waxa hareereyay Somalia (ostafrika) Dagaalka Ehli ah afooyinki u gaystay kaso kabsan la. Dagaalkas kuma nafwaayin o kaliya shacab badan o Somalia, kumana burburin Dhulki iyo hanaanki dawladnimo, waxa kaloo ku mustaqbal belay, jiilal ama whole generations dhan oo Somalia, waxa laga dhumiyay chances for education, further development and safe life deprived. Caruurti culays caafimad u dheera, waxa kusii adkaday in ay especially hard to survive under these conditions in Somalia, wallow aysan daryeel haysan dagaaladi ka horba, Sanadadii dagaaladana situation waa ka sii xumaaday.
Dadka culayska caafimad haysto
Ma jiraan medical ama social facility, dadka caafimadkooda culus yahay u xilsaaran, waxa u siidheer, dadka Jiran oo social stigma qaba, madama wali Somalia waxyaalo kutiri kuteen ah ka jiraan, sida qofka jiran in cuquba ku dhacday, qof caro Allaah hayso, sidaa darted qofkan xaalada u ku sugan yahay, asga ka masuul ah, dad badana waxaybaa qabaan in aan loo gurman ama la caawin.
Marxaladaha noocaas ah waa kuwa ila so gudboonaday, marku dhashay wiilka caruurtayda ugu yar, Abschir Hassan, igana xanuun saday. Inkasta oo aan ku noolahay wadanka Germany, hadana taas igma difaacin dhaga kuhadalka la ii so marinayay, khadka isgaarsinta, waa Waarid caasi iyo wixii la mid ah, waxan is waydiiyay, hadanba anigu waarid caasi ahay, ma sabigan yar baa danbi aan galay laga goyn. Waxa I cadaatay dhibka haysta ,hooyada Somalia cunug jiran ku haysata. Waxa kaloo jira organizations, gudaha iyo dibadaba ka jira oo dadku ka niyad jabeen, wax qabad xumadooda, dadku paranoia ayay ka qaadeen, waxan kaloo Meesha ka maqnayn corruption Africa ragaadsaday, sida darted, waxan ku hanweynahay in aan Somali tago, anoo concrete presentation as well as realistic and implementable projects.
Aniga igu saabsan ama
Magacaygu waa Muna M Abdi waxan dhashay 1970,waxan ku dhashay kuna so barbaaray magalo Madaxda Somalia Mogdishu, waxan kuso qaatay waxbarashadaydii Iskuulka oo dhamaystiran, marka laga reebo, dhawrkii sano ee noloshayda ugu horaysay,ee la so qaatay reer Abtigay, oo wakhtiga ku noolaa Baadiyaha Gobolka Mudug, o hada ka mid ah Dawlada Puntlnd.
Markii aan jiray dada Sanad iyo badh, waxa kala tagay labadaydi waarid, Madama aan ilmo aad u yar ahaa,waxay Hooyaday ila baqooshay, halki ay Waaridkeed ku noolayen, waxayna door biday in aan dhawr sano, la so noolado, ka dib markan so garay, dada todobo sano ilaa sideed sano u dhaxaysay.
Waxay igu so celisay, Magalo Madaxdii ay ku noolaayeen Qoyska Aabahay, o ay ka so jeedeen, Sanadki 1991 waxa Magalo Madaxdi so gaaray Dagaalki Ehliga ahaa e Somalia ka qarxay,aniga iyo Familkayga qayb ka mid ah, waxan door bidnay, in aan nabad galyo u raadsano, wadanka Jaarka ah e Kenya,isla Sanadki 1991, bishii September waxan u so baqoolay, wadanka Germany,in ka badan 26 Sano aan ku Nagaaday, waxan ahay German citizen, waana Hoygayga kowaad, waxa igu dhashay Afartayda Caruur ah een aduunkaugu jecelahay, Wiilka Caruurtayda ugu yar, Abschir Abdi-Hashi Hassan, dhalashadii ayaa dhaacaw Unugyada maskaxda ka so gareen, taasoo keentay culays caafimad o la so daristay.